“Horyaalka wali lama go’aamin.” – Ole Gunnar Solskjær oo fariin cad u diray Man City – Gool FM
“Horyaalka wali lama go’aamin.” – Ole Gunnar Solskjær oo fariin cad u diray Man City
(Manchester) 22 Feb 2021. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wali ku adkeysanaya in tartanka horyaalka Premier League aan wali la go’aaminin.
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dib ugu soo laabtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League markii ay 3-1 ku garaaceen Newcastle United oo ay ku soo dhoweeyeen Old Trafford.
In kasta oo farqiga weyn oo 10 dhibcood ah uu u dhexeeyo hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Manchester City iyo kooxda kaalinta labaad ee Manchester United, haddana tababaraha Red Devils wuxuu weli aaminsan yahay suurtagalnimada ay ugu tartami karaan hanashada koobka Premier League.
Ole Gunnar Solskjær ayaa kaddib guushii ay ka gaareen Newcastle United, wuxuu warbaahinta u sheegay suurtagalnimada ay Man United ugu guuleysan karto horyaalka, wuxuuna yiri:
“Waxbaa dhici kara, laakiin tani maahan wax aan ka fikirno, kaliya waxaan ka fikirnaa qaab ciyaareedkeena, waana tan kaliya ee aan xakameyn karno, maadaama aan heysano waxyaabo badan oo aan u ciyaarno, koox ahaana waxaan heysanaa waxyaabo badan oo aan dooneyno inaan wanaajino.”
Maxaa ka cusub wararka Sergio Ramos la xiriirinaya inuu ka tagayo kooxda Real Madrid?